लिम्वूवान - विविध सामग्री: नौ मूर्ख चोरका नौ किस्सा
चोरेको जुत्ता लगाएर अदालतमा
अमेरिकाको कन्सास राज्यका चार्ली टेलर जुत्ता चोरेको आरोपमा पक्राउ परे　। तीन महिनापछि अदालतमा प्रस्तुत गरिँदा उनले त्यही जुत्ता लगाइरहेका थिए जुन जुत्ता चोरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको थियो　। त्यस मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका न्यायाधीश चार्लीले चोरिएको जुत्ता नै लगाएको देखेर जिल्ल परे　। के मानिस यतिसम्म पनि मूर्ख हुन सक्छ जसले आफूले गरेको अपराधको प्रमाण आफूसँगै बोकेर हिँड्छ ? त्यही प्रमाणले गर्दा उनको अभियोग प्रमाणित भयो र उनले जेलमा कोचिनुपर्‍यो　।
गलत ठाउँ, गलत समय
सन् १९७८, नोभेम्बर २९मा डेभिड गुडकल र अन्य दुई महिला चोरी गर्ने उद्देश्यले घरेलु सामानको कारोबार गर्ने पसलमा छिरे　। उनीहरूले चोरे जम्माजम्मी दुईवटा कपासको पोका　। चोरीको सामान झोलामा राखी छुट्टाछुट्टै ढोकाबाट बाहिरिँदै थिए　। दुर्भाग्यवश उनीहरू गुप्तचरबाट समातिए　। गुडहल र उनका साथी चोर्न छिरेकै समयमा पसलमा गुप्तचरहरूको सम्मेलन भइरहेको उनीहरूले मेसो पाएनन्　।
बाल्टिमोरका १८ वर्षीय चार्ली ए मेरिवेदर एउटा घरभित्र छिर्‍यो र घरमा एक्लै बसेकी ३४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गर्‍यो　। चोरीका लागि घरतलासी गर्दा ११ डलर पचास सेन्ट रकम भेट्टायो　। उसले ती पीडित महिलालाई उल्टै सोध्यो, 'तिमी बिल कसरी तिर्छ्यौ ?
तिनले जवाफ दिइन् 'चेकबाट　।'
उसले ती महिलालाई ३० डलरको चेक काट्न लगायो　। त्यसलाई रोकेर तुरुन्तै पचास डलरको चेक काट्ने आदेश दियो　। ती महिला सरकारी जागिरे थिइन्　। उनले चलाखीपूर्ण प्रश्न गरिन्, 'कसको नाममा चेक काटौं ?'
'चार्ली ए मेरिवेदर !' उसले आफ्नो असली नाम बतायो, 'यो चेक फिर्ता भयो भने म फेरि आउँछु नि ! त्यसैले सोचेर काट्नू　।' त्यसको केही घन्टामै चार्ली पक्राउ पर्‍यो　।
काग बाठो हुँदा
१९७७ मा एउटा चोर चलाखीपूर्ण ठगी गर्ने उद्देश्यले एउटा सुपरमार्केटमा छिर्‍यो　। सामानले झोला भरिएपछि ऊ पैसा तिर्ने क्यास काउन्टरमा पुग्यो　। त्यहाँ उसले दस पाउन्ड राख्यो र सामान बोकेर टाप कस्यो　। उसले झोलाभरि राखेका सामानको जम्मा रकम चार पाउन्ड रहेछ　। बढी बाठो हुँदा उसले उल्टै ६ पाउन्ड गुमाउनुपर्‍यो　।
हेल्मेटमा लेखिएको हुनाले
क्लिभ वुनयान इंग्ल्यान्डको एक स्टोरमा प्रवेश गर्‍यो　। पसलेबाट उसले त्यतिवेलासम्म जम्मा भएको १५७ पाउन्ड लुटेर मोटरसाइकलमा भाग्यो　। उसले आफ्नो अनुहार ढाक्न हेल्मेट लगाएको थियो　। हेल्मेटले गर्दा आफ्नो पहिचान खुल्दैन भन्नेमा ऊ ढुक्क थियो　। तर, उसले बिर्सेछ- त्यो हेल्टममा एक इन्च लामो अक्षरमा लेखिएको थियो- 'क्लिभ वुनयान ड्राइभर' अर्थात् उसको आफ्नै नाम　। पछि ऊ पक्राउ पर्‍यो　। उसलाई दुई सय घन्टा सामुदायिक सेवा गर्ने दण्ड दिइयो　।
ओक्लोहामामा बस्ने २५ वर्षे मार्सल जर्ज कुमिङ्सलाई डकैती गर्ने मनसायले एक सपिङ सेन्टरको भित्ता कोरेको र लुछेको अभियोग लाग्यो　। जनवरीमा हुने पुर्पक्षका बेला उसले आफ्नो बहस पैरवी आफै गर्ने निधो गर्‍यो　। पीडित व्यक्तिसँग कुमिङ्ले सोध्यो- 'मैले तिम्रो पर्स लिने बेला तिमीले मलाई देखेका थियौ त ?' यसरी, आफ्नो पोल आफै खोल्यो　। त्यसपछि आफ्नो प्रतिरक्षार्थ उसले अर्कै वकिलको खोजी गर्‍यो, तर त्यतिवेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो　। उसको अभियोग प्रमाणित भएर उसलाई १० वर्षका लागि जेलसजाय सुनाइसकिएको थियो　।
तित्राको मुखै बैरी
डेनिस न्युटन १९८५ मा ओक्लोहामा सहरमा एक सशस्त्र डकैती गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनिएको थियो　। सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता लारी जोन्सले एकजना साक्षी, डकैती गरिएको पसलकी सुपरभाइजरलाई डाँकालाई चिन्न भने　। जब उनले प्रतिवादीतिर औंलो ठड्याइन्, न्युटन उफ्रियो र साक्षीले झुटो बोलेको भन्दै प्रतिवाद गर्‍यो- 'त्यतिवेला डकैती गर्नेमध्ये म भएको भए मैले त्यतिबेलै तिम्रो गर्धन छिनाइसक्या हुन्थेँ　।' अदालतले उसलाई ३० वर्षको जेल सजाय तोकेको फैसला गर्‍यो　।
किन रोइस् मंगले
१९८९ मा क्यालिफोर्नियामा स्टेफेन ली र दुई युवक मिलेर पार्किङमा राखिएको ट्रक लुटपाट गर्ने कोसिस गरे　। तर, त्यस ट्रकधनीले उनीहरूलाई बीचैमा देख्यो र समात्नका लागि लखेट्यो　। ली र उसको साथी एउटा रूख चढेर भागे　। तर, अभागी ठिटाहरू ! त्यो ठाउँ सान क्युनटिन जेल परिसरभित्र पर्थ्यो　। उनीहरूमाथि मुद्दा हालियो　। तर, त्यो कहिल्यै अनुसन्धानको विषय बनेन　। चोरहरू आफै जेल क्षेत्रभित्र पसेको सो घटनालाई बिरलै घटनाको रूपमा लिइन्छ　।
आफ्नै खुट्टामा गोली
फेबु्रअरी २००४मा न्युयोर्कका चार्लास टेलिभिजन चोर्ने नियतले एक बारमा पस्यो, तर तुरुन्तै बाहिरियो　। रात केही बितेपछि ऊ फेरि सोही बारमा चोर्ने उद्देश्यले छानाबाट भित्र छिर्‍यो　। यसपटक उसँग हातमा पेस्तोल पनि थियो　। ऊ छानाबाट चिप्लियो　। त्यस क्रममा उसले बोकिराखेको पेस्तोल पड्किँदा दाहिने खुट्टामा गोली लाग्न पुग्यो　। ऊ सरासर घर गयो, तर आफूले रगतको टाटा छोड्दै आएको भने याद गरेन　। ऊ पक्राउ पर्‍यो　। त्यहाँ उनीहरूले चोरिएको टेलिभिजन पनि बरामद गरे　।